विश्‍व बैंकको प्रक्षेपण: तीन वर्षसम्म आर्थिक बृद्धिदर घट्ने, खर्च घटाउन सुझाव - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
विश्‍व बैंकको प्रक्षेपण: तीन वर्षसम्म आर्थिक बृद्धिदर घट्ने, खर्च घटाउन सुझाव
Published On : ५ बैशाख २०७५, बुधबार १७:४५
काठमाडौं : दुई तिहाई बहुमत सहितको सरकाले समृद्ध नेपाल अभियान अन्तर्गत लगातार दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुनेगरीका योजना अघि बढाउने बताएको छ। यद्यपी चालु आर्थिक वर्षमा बजेटमा राखिएको लक्ष्य संसोधन गरेर ६.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने बताएको छ।
बहुराष्ट्रिय दातृ निकाय विश्‍व बैंक र एसियाली विकास बैंकले क्रमश ४.६ र ४.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको संशोधित प्रक्षेपण गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि कायम गरेको नेपाल चालु आर्थिक वर्षमा भने दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धि कायम हुने प्रक्षेपण गरेको छ। विश्‍व बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार लगातार तीन वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर घट्दो रहने छ।
बैंकका अर्थशास्त्री सुदम्यन दाहालले यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएर ४.६, आगामी वर्ष ४.५ र अर्को वर्ष ४.२ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको बताए। त्यस्तै आगामी केही वर्ष नै आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशत तल रहने विश्‍व बैंकले जनाएको छ। नयाँ संघीय प्रणालीले आगामी दिनमा थप वित्तीय दायित्व सिर्जना भई खर्चको दवाव बढ्ने भन्दै खर्च कटौती गर्न सरकारलाई सुझाएको छ। दायित्व बढ्दै गएर बजेट घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५.९ प्रतिशत पुगेको बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।